Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ayaa dhawan safaarada Soomaliya ee Talyaaniga ka bilaabeysa adeega bixinta Baasaboorka – XAMAR POST
By Mohamed Ahmed Last updated Jul 4, 2017
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ayaa dhawan safaarada Soomaliya ee Talyaaniga ka bilaabeysa adeega bixinta Baasaboorka iyo Aqoonsiga.
Agaasimaha Guud ee Hay’adda Socdaalka iyo jinsiyaddaha Col Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo safar shaqo u joogey dalka Talyaaniga ayaa booqdey safaaradda Soomaaliya ay ku leedahey Magaaalada Roma, wuxuuna kulan la qaatey safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Talyaaniga, waxaana ay ka wada hadleen sidii safaarada dib looga bilaabi lahaa adeega bixinta Baasaboorka.
Agaasimaha guud oo ka jawaabayay cabasho bulshada Soomaalida ah ee ku nool dalka Talyaaniga iyo dalalka u dhaw ay ka qabeen xirnaanshaha xaafiiska bixinta baasaboorka ayaa sheegey in mudo 3 asbuuc gudahood ah laga bilaabi doono safaaradda bixinta baasaboorka iyo aqoonsiga.
Hay’adda ayaa hore u balan qaadey in adeegga bixinta baasaboorka la gaarsiin doono dhammaan safaaradaha iyo qunsuliyadaha ay Soomaaliya ku leedahey dalalka caalamka intooda aan hadda laga bixin baasaboorka iyo aqoonsiga.
War Deg deg ah Agaasime Bahlaawi oo ku dhaawacmay Qarax loogu xiray Gaarigiisa.